ဝါးခယ်မ : ဦးကိုနီ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းများ စုစည်းမှု ( ၁ )
ဦးကိုနီ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းများ စုစည်းမှု ( ၁ )
( ရန်ကုန်လေဆိပ် တွင် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသော ဦးကိုနီ နှင့် ပတ်သက်၍ Facebook ပေါ်ရှိ မှုခင်းသတင်းများ စုစည်းမှု Page တွင်ဖော်ပြထားသော သတင်းများအား ကူးယူဖော်ပြပါသည် )
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေး လွတ်တော်ရှေ့ နေဦးကိုနီဟာ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို ပြန်လည် ရောက်ရှိလာချိန်မှာ သူရဲ့ မြေးလေးကို အားရပါးရပွေ့ ချီပြီး မြေးအဖိုးနှစ်ဦး ကြည်နှုးနေခဲ့ကြ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ပန်းရောင်အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီတို ၀တ်ဆင်ထားသူတစ်ယောက်ဟာ ဦးကိုနီရဲ့ဦးခေါင်း ညာဖက်အခြမ်းကို သေနတ်နဲ့အနီးကပ်ပစ်ထည့် လိုက်ပါတယ်
သည်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှေ့ က တက္ကစီစတန်းအနီးမှာ စူးစူးရှရှနဲ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့ အသံဖြစ်ပါတယ်။
အဲသည်အသံနဲ့ အတူ တက္ကစီစတန်းအနီးနားမှာရှိတဲ့ လူတွေ ၀ိုးတိုးဝါးတားကြားလိုက်ရတာကတော့
” ”မင်းငါ့ကို ……”။
ဒါပေမယ့် လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားဟာ ပြေးမြဲပြေးနေရာကနေ တွေ့ ရာတက္ကစီတစ်စီးကို သေနတ်ထုတ်ကာ တားဆီးလိုက်နေပြန်ပါတယ်။
အဲသည်အမျိုးသားက ကားစက်ဖုံးကို သေနတ်နဲ့ခေါက်ပြီး သူ့ ကို လိုက်ပို့ ပေးဖို့တောင်းတနေ တာဖြစ်တယ်လို့တက္ကစီအငှားယာဉ်မောင် ဦးကျော်လွင်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကားသမားက မရပ်ပေးတာကြောင့် အဆိုပါအမျိုးသားဟာ ဓာတ်တိုင် လေးတိုင်အကွာအဝေးလောက်ကို ဆက်လက် ပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
သေနတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ အမျိုးသားက ဦးနေ၀င်းကို ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး ” ခင်ဗျာနဲ့မဆိုင်ဘူး”လို့အော်ပြောနေချိန်မှာ ဦးနေ၀င်းက အုပ်ခဲနဲ့နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ထုလိုက်ပြန်ပါတယ်။
ဦးနေ၀င်းကို သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီး ပြီးချင်းမှာပဲ သေနတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူအမျိုးသားက ချက်ချင်းလှည်ထွက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ဘေးနားမှာ အသင့်ရှိတဲ့ ဦးနေ၀င်းရဲ့ အဖော်တက္ကစီယာဉ်မောင်းတွေဟာ ၀ိုင်းအုံပြီး လက်ရဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
အဲသည်အချိန်မှာပဲ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲ့လူစုခွဲသေနတ်ဖောက်သံကြောင့် လူစုခွဲလိုက်ြ ကသည် ။
သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်မှုဒဏ်ကြောင့် ဦးကိုနီလဲကျသွားချိန်မှာတော့ အနီးနားမှာရှိနေသူတွေဟာ ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိ ပြာပြာသလဲဖြစ်နေကြပါ။
”ဘာဖြစ်သွားတာလဲ” ၊ ”သေနတ်နဲ့ ပစ်သွားတာ”၊ ”ဘာသံမှ မကြားလိုက်ရဘူး” ၊ ”ဦးကိုနီလား” ၊ “ဟာ… ဦးကိုနီ” ၊ ”ပါပါ.. ဟုတ်တယ်” (သမီးဖြစ်သူရဲ့ အသံ) ဆိုတဲ့ အသံတွေက ဆူဝေလာခဲ့ပါတယ်။ သွေးအလူးလူး ဦးကိုနီရဲ့ဦးခေါင်းကို သွေးတိတ်စေလေမလားဆိုပြီး ဖိကပ်ပြီးနေကြပေမယ့် ဦးကိုနီက တုန့် ပြန်ပြောဆိုတာ မမြင်တွေ့ ရတော့ပါဘူး။
” ဆရာဦးကိုနီဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စက အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တယ်။ တရားဥပဒေအရ နိုင်ငံသူ နိင်ငံသားတိုင်းကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ လိုတယ်ထင်ပါတယ်။ တရားဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်မဲ့ မှုကို ဆရာဦးကိုနီကိုယ်တိုင်ခံ စားသွားရပြီ” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သေနတ်သမားရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့် တရားလွတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီ ကို လုပ်ကြံခဲ့သူကို ဖမ်းဆီးပေးတဲ့ တက္ကစီယာဉ်မောင်းကိုနေ၀င်းဆိုသူဟာလည်း မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံမရောက်ခင် လမ်းမှာဘဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
သေဆုံးသွားတဲ့တက္ကစီသမားကိုနေ၀င်းဟာ ကလေးသုံးယောက်ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သူ Airport Taxi သမား ဦး ကျော်လွင်ကပြောပါတယ်။
ဦးမြအေးက -“တရားခံမိထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဥပဒေအရမြန်မြန်ဆန်ဆန်အမူမှန်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ် တရားမျှတမူပဲလိုချင်တယ်”လို့ပြောပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ရှေ့နေဦးကိုနီရဲ့ အလောင်းကို မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံမှာစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံမှုမြင်ကွင်းကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ လိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက
“လက်နက်ချပြီဆိုတော့ ရဲတွေက အသာတကြည်ဖမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမှ အိတ်ထဲကနောက်ထပ်ဝှက်ထားတဲ့သေနတ်နဲ့ ရဲကိုလှမ်းပစ် ( မထိလို့တော်သေးတယ် )တဲ့အချိန်မှာမှ သူ့နောက်ရောက်နေတဲ့ ဒုရဲအုပ်က အတင်းဝင်လုံးထွေးပြီးဖမ်းမှ ဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့… လူသတ်သမားဟာ ဘယ်အချိန် ဘယ်ကာလကတည်းက ဘယ်လောက်တောင်တိုက်ခိုက်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြည့်ဝထားတဲ့သူပါလိမ့်” လို့ဆိုပါတယ်။
ညနေက ကျနော်က ရန်ကုန်လေဆိပ် လမ်းထဲအဝင် domestic terminal အကျော် အဝိုင်းပတ်ပြီး မြင်လိုက်ရတာက လူ ၅၀-၆၀ လောက်က အုတ်နီခဲတွေ တုတ်တွေနဲ့ ပြေးလာတာကိုမြင်ရတယ်..
တီရှပ်နဲ့ ဘောင်ဘီတိုဝတ်ထားတဲ့ တရုတ်တစ်ယောက်နောက်ကို ဝိုင်းလိုက်နေတာ..
မှန်ချပြီး အသံနားထောင်ကြည့်တော့ ဆဲသံဆိုသံတွေကြားမှာ အနားမကပ်နဲ့ သေနတ်ပါတယ် ဆိုမှ သူ့လက်ထဲကြည့်မိတော့ ပြောင်းရှည် ပစ္စတိုသေနတ်ပါတာမြင်ရတယ်..
ကြည့်နေရင်း သူ့နောက် ၅ ပေ လောက်အကွာရောက်နေတဲ့ Taxi သမား ( နောက်မှသိရတာ ) က သူ့လက်ထဲက အုတ်နီခဲနဲ့ လှမ်းပစ်တယ်..
အဲ့တရုတ်က ချက်ချင်းလှည့်ပြီး သေနတ်နဲ့ပစ်တာ ဘောင်းဆို Taxi သမားရဲ့ကျောကိုမှန်တယ်..
ကျနော်လည်း ချက်ခြင်းကားကိုဘယ်ဘက်က ကားပါကင်ထဲမောင်းချပြီး ချက်ခြင်းဆင်းလိုက်တယ်တယ်..
ပေ ၁၀၀ လောက်အကွာမှာ သူက သေနတ်ပြပြီး ကားတွေကိုတားတယ်...
Terminal 1 ကနေ ခုနေရာထိ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့လူနောက်ကို တုတ်တွေ အုတ်ခဲတွေကိုင်ပြီးလိုက်လာတာ အရပ်သား taxi သမားတွေချည်းပဲ..
ရဲဝတ်စုံနဲ့ တပ်သားတစ်ယောက်ကတော့ ဖုန်းလေးပွတ်ရင်း လမ်းလျှောက်လိုက်လာတယ်..
လေဆိပ်ထဲမှာ မျက်နှာအလွန်မာပြီး ဆော်ကြည်အောင် နိုင်ငံခြားစတိုင်ဖမ်းနေတဲ့ လေဆိပ်တွင်းလုံခြုံရေးချာတိတ်က သူ့ခါးက ကျည်မပါတဲ့ပစ္စတိုကို မကိုင်ရဲကိုင်ရဲစမ်းရင်း အနားမကပ်ရဲဘူး...
အဲ့ တရုတ် သေနတ်ပြပြီး ရပ်ခိုင်းလို့ရပ်သွားတဲ့ taxi ပေါ်ရောက်သွားတော့ လူအုပ်ကြီးက taxi ကို ခဲတွေနဲ့ဝိုင်းထုတယ်အသေခံပြီး အဲ့ တရုတ်ကို ကားပေါ်ကဝိုင်းဆွဲချကြတယ် သူက နောက်ထပ် ၂ ချက်ထပ်ပစ်တယ်..
မြန်မာ့သွေးလေ.. ကားပေါ်ကနေဆွဲချပြီး အုတ်နီခဲတွေ တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းလိုက်ကြတာ အခြားပို့စ်က ပုံတွေမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ...မိပြီဆိုတော့မှ..
" ဟေ့ .. မဆိုင်တဲ့သူတွေ အကုန်ဘေးဖယ် "
ဆိုတဲ့ စကားကြီးကိုမိန့်ကြားလိုက်တော့ ..
" မဆိုင်သူတွေသာ ဝင်မပါကြေးဆို ခင်ဗျား ခုရောက်လာချိန် လေဆိပ်မှာ သေနတ်တစ်ဒိုင်းဒိုင်းပစ်နေတဲ့ ခင်ဗျားအဖေက taxi စီးပြီး ၈ မိုင်ရောက်နေပြီ " ဆိုတော့ ပြန်တောင်မပြောရဲဘူး ဖူးစတားကြီးက..ကျနော်လဲ မသိဘူး..ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ သူ အထဲဝင်ရတော့မယ်..
လေးစားစရာကတော့ လေဆိပ်က taxi သမားတွေပါပဲ သူတို့ဝိုင်းလိုက်လို့ မိတာ..
သေနတ်ကတော့ 9mm ထက်ပိုကြီးမယ် ထင်တယ်
9mm က ဖန်းဖန်းပဲမြည်တာလေ..
ခုဟာက ကျနော့်ရှေ့ ပေ ၂၀ လောက်မှာပစ်တာ ဘောင်းဆို ယမ်းကန်အားက မီးခိုးပြာတွေတောင်ထွက်တယ်.. ပြောင်းကလည်းရှည်တော့ .
.45 ထင်တာပဲ ခါးမှန်တဲ့ taxi သမားတောင် တစ်ချက်တည်းနဲ့ အပြီးပဲလေ..
ဖမ်းဆီးရမိထားသူ ၏ အိမ်ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှု
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဦးကိုနီအသတ်ခံရသည်နှင့်ပတ်သက်၍ တရားခံဟု ယူဆရသူနေထိုင်သည့် မန္တလေးမြို့၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ၃၄လမ်း၊ ၇၃လမ်းနှင့် ၇၄ ကြားရှိနေအိမ်အား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရပြီး လုံခြုံရေးယူထားကာအပြင်လူများဝင်ရောက်မှုကို ကန့်သတ်ထားခဲ့သည်ဟုသိရပါသည် ။
ဦးကိုနီအား သနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးရမိသူသူ ဦးကြည်လင်း ဆိုသူသည်
မန္တလေးမြို့၃၄လမ်း ၇၃-၇၄ ကြားတွင်
ကြယ်သုံးပွင့်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ. တစ်ခုမှ ဖြစ်သည်ဟုဆိုပြီး မည်သည့်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ.မှန်းမသိရကြောင်း Facebook User တစ်ဦးမှ ဖော်ပြလာခဲ့ကာ
၀င်ရောက်စစ်ဆေးစဉ်သူ့ သမီးနှင့် မိန်းမမှာ မုန့် စားမပျက်တီဗွီကြည့် မပျက်ရှိနေခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည် ။
( သို.သော် နောက်ပိုင်းသိရသော သတင်းများအရ အထက်ပါပုံမှာ ခေတ္တ၀င်ရောက်အနားယူသောဆိုင်မှပုံကိုရိုက်ယူပြီး တင်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကာယကံရှင်မိသားစုမှလည်း ထိုကဲ့သို.မဟုတ်မမှန်ရေးသားဖြန်.ဝေမှု များကို အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း လည်း သိရပါသည် ။ ထိုအိမ်မှာလည်း ဦးကြည်လင်းဆိုသူနှင့် မည်သို.မျှမသက်ဆိုင်ကြောင်း သိရပါသည် )
ဦးကိုနီ ပစ်ခတ်ခံရမှုအပေါ် ပြောကြားမှု နှင့် တိုက်တွန်းချက်များ
ဦီးကိုနီလုပ်ကြံခံရတဲ့ကိစ္စ ဘာသာရေးပဋိပက္ခမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဥက္ကဌပြော
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး ဥက္ကဌ ဦးမြင့်မောင်ရှိန်
တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး ဥက္ကဌ ဦးမြင့်မောင်ရှိန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီဟာ သည်ကနေ့ ငါးနာရီဝန်းကျင်မှာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စကြောင့် မွတ်စလင်ဘာသာရေးအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ အငြင်းပွားခဲ့မူများရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ တရားဥပဒေအတိုင်းသာ လက်ခံဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဥက္ကဌ ဦးမြင့်မောင်ရှိန်ကပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့အဆင့်နဲ့တော့ ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူကလုပ်ကြံတယ် ဘယ်သူကခိုင်းတယ် ဘယ်သူကနောက်ကွယ်မှာ လူပ်ရှားတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအချိန်မှာ လုံးဝလက်လှမ်းမမှီနိုင်ပါဘူး”လို့. သူကပြောပါတယ်။
ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပုံတွေအရကျူးလွန်သူဟာ နောက်မှအနီးကပ်ပြီး ၉မမပစ်စတိုနဲ့ ဦးခေါင်းကိုချိန်ကာ ပစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ကြံခံရတဲ့နေရာဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ၄င်းတို့အနေနဲ့ လွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ သူကဆက်ပြောပါတယ်။
“အထူးသဖြင့်ဒီလိုနေရာကြီးမှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရခြင်းမှာ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်လုံခြုံရေးကိုလုံးဝအားမရပါဘူး ဒီလိုလူတစ်ယောက်ဆုံးရူံးလိုက်ရတာဟာ ဒီမိုကရေစီကိုလက်ခံလျှောက်လှမ်းနေတဲ့လူတွေအားလုံး အတွက်လွန်စွာဆုံးရူံးရပါတယ်”လို့ သူကပြောပါတယ်။
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှုအပေါ် အလွန်အကျွံ တုံ့ပြန်မှု မပြုရန် အန်အယ်လ်ဒီ တိုက်တွန်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဗဟိုဥပဒေအထောက်အပြုအဖွဲ့ဝင် ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရတဲ့အပေါ်မှာ အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ အလွန်အကျွံ တုံ့ပြန်မှုမပြုဘဲ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီက ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဦးကိုနီဟာ ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ အဖွဲ့ချုပ်အတွက် အစားထိုးမရနိုင်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီကို အနီးကပ်လုပ်ကြံတဲ့သူကို ဖမ်းဆီးထားတဲ့အပြင် ကြံရာပါတွေကို အဆောတလျင် ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူကို တားဆီးရင်း အသက်ပေးခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်က အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် တက္ကစီမောင်းသမား ဦးနေဝင်းနဲ့ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးသူတွေကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတယ်လုိ့လည်း ကြေညာချက်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
အလားတူ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းကလည်း ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်မှာ ဥပဒေပညာရှင်တယောက် ဆုံးရှုံးရတဲ့အပေါ် နှမြောတသ ဖြစ်ရပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်သွားမယ်လို့ သဘောထား ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
လူသတ်သမားကို မိနိုင်ရေးအတွက် ကူညီပေးသူ တက္ကစီယာဉ်မောင်းကို ဂုဏ်ပြုထားပြီး အကြမ်းဖက်လုပ်ကြံမှုကို အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ အမြန်ဆုံး အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရသည့်အပေါ် ဦးဝင်းထိန်၏ ပြောစကား (ရုပ်သံ)
Ref ; Mizzima , Annawar Soe Wai , Phyowai Thinn , DVB ,The Voice & ကုမုဒြာ
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 1:16 PM
Labels: စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းများ
ဦးအောင်ခမ်းထီ ( သို.) ဗိုလ်မှုးကြီးအောင်ခမ်းထီ အေ...
ဦးအံ့ကျော် ကြက်တောင်ရုံ နှင့် အားကစားခန်းမ
Myanmar Idol နဲ. ရဲနောင် ( ၃ )
Myanmar Idol နဲ. ရဲနောင် ( ၂ )
Myanmar Idol နဲ. ရဲနောင် ( ၁ )
ဦးကိုနီ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း ဆိုင်ရာ သတင်းများစုစည်းမှ...
ဦးကိုနီ သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းများ စုစည်းမှ...